Mayelana NATHI - Beijing Hengqianxiang International Trade Co., Ltd.
Ijackethi ebheke phansi
I-Beijing Hengqianxiang International Trade Co., Ltd. eyatholakala ngo-Sep 2012, iqoqo lokuklama, ukukhiqiza nokuhweba ngokuhlanganiswa kwamabhizinisi amakhulu abangochwepheshe. Imboni yethu inohlelo lokukhiqiza oluvuthiwe nohlelo lokuphatha. Sinezimboni eziningi zesikhathi eside ezibambisanayo, zikulungele ukubheka nokuthumela izimpahla. Inkampani yethu inokuhlangenwe nakho kweminyaka engamashumi amabili kokuklama, ukukhiqiza nokuthengisa ngemishini engaphambi kwesikhathi, ubuchwepheshe obuhle nesitayela sokuqala. Sine siqu brand ezimele amaningi avuthiwe, "ZHANSHI", "EAST INDLOVU", "UMHLAHLANDLELA BIRD" njll, imikhiqizo yokuthengisa kahle kakhulu phesheya.
Ingubo yethu yomkhiqizo wenkampani isuselwa kujeketi eboshwe, ijakhethi ephansi, ijakhethi yebhomu, ijazi loboya, ijazi le-PU kanye ne-windbreaker njll izingubo zabesilisa nabesifazane. Ukunikeza ukubekwa phambili kwekhwalithi enhle nesitayela semfashini, imikhiqizo yethu idumile ngenani elikhulu lokuphishekelwa kwemfashini nekhwalithi yamaqembu abathengi athembekile, athengiswa kahle eNyakatho Melika, eYurophu naseNingizimu Afrika.
Inkampani yethu ihlala ithuthukisa izimakethe ezintsha, imikhiqizo emisha, ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha, ifake izinto ezintsha zemfashini zamazwe omhlaba, iqonde ukuthambekela kokuthuthuka kwezingubo zomhlaba wonke, ukwakha "Umkhakha wezingubo zomhlaba wonke womkhiqizo wokuqala"ngokuqhubekayo. Silayisha i-"induduzo","ukusebenza okuphezulu","ubusha"kudizayini; landela"ikhwalithi kuqala", "ikhasimende eliphambili"njengomnyombo ekukhiqizweni okuningi; sizothengisa e"ubuqotho","onomthwalo wemfanelo","win-win". Ngemuva kweminyaka eminingi yentuthuko eqhubekayo, inkampani inemakethe ezinzile manje futhi ilangazelela ukusungula ubudlelwano bebhizinisi nokubambisana kwesikhathi eside nenkampani yakho ehlonishwayo. Sikholelwa ukuthi ngemizamo yethu ehlangene, sizokwakha ukubambisana kanye nekusasa elihle.
Ikheli:RM4A22, Isakhiwo B, Ritan International Trade Center, Chaoyang District, Beijing, China 100020
Umakhala ekhukhwini: 0086-18515900837